May 10, 2020 3050
भारतीय सिलेब्रिटी र फिल्म अभिनेत्री’हरुले महंगो र ब्राण्डेड सामा’नको प्रयोग गर्छन भन्ने कुरा त तपाई’लाई थाहा भएको हुनसक्छ । तर कति सम्म महंगो भन्ने अनु’मान लगाउन भने पक्कै गाह्रो कुरा हो ।
सर्वसाधारणले सेलिब्रेटीको खानपान, पहिरन देखि हरेक कुरालाई ख्याल गरिरहेका हुन्छन् । उनीहरुको जिवनशैली देखेर सर्वसा’धारण प्रभावित हुन्छन् । त्यस्तै जिवनशैली अपनाउन पाए भन्ने कल्पना गर्नु पनि स्वभाविकै हो ।
सामान्यता महिलाहरुले ह्याण्ड व्यागको प्रयोग गर्छन् । कतै जाँदा वा पार्टीहरुमा जाँदा प्रयोग गर्ने ह्या’ण्ड व्यागहरु तपा’इँहरुले कति मूल्यको प्रयोग गर्ने गर्नु भएको छ । सामान्य नागरि’कले बोक्ने त्यस्ता ब्याग २ देखि १५ हजार सम्मका हुन्छन् होला । तपा’ईले बोक्ने ब्यागको मुल्य पनि सायद यहि वजेटमा आउँछ होला ।
तर भारतीय फिल्म अभिनेत्रीले बोकेको एउटा ह्याण्ड व्यागको मूल्य कति होला ? अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ ? करीना कपूर खान देखि लिएर सोनम कपूर तथा आ’लिया भट्टसम्म सामान्य’तया ह्याण्ड व्याग बोकेको हामिले देखेका हुन्छौं । उनीहरुको भि’डियोमा ब्याग बोके’को देख्न सकिन्छ । हामीले देख्दा सामान्य लाग्ने ति ब्यागका मुल्य भने लाखौं रुपैयाका हुन्छन् ।
करीनाले बोक्ने हर्मिस व्यागको मूल्य त १० लाख रुपैयाँ रहेको समाचार भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुमा प्रकाशन भएका छन् । अव यो लिस्ट मा अर्को एक नाम जोडिएको छ । र उनी हुन् अनुष्का शर्मा ।
केही दिन पहिला विमानस्थमा अनुष्का शर्मा दुई अलग– अलग लुक मा देखिएकी थिइन् । तर यसमा एउटा समानता थियो । समान’ता हो फेन्डी ह्याण्ड व्याग । त्यो ब्याग’को मुल्य नै यति महं’गो थियो कि त्यो ब्यागका बारेमा समाचार बनेका छन् ।
पहिलो फोटोमा अनुष्काले कालो रंगको व्याग बोकेकी थिइन् । त्यस्तै अर्को तस्वीरमा पनि उनले का’लो फेन्डी ह्याण्ड व्याग प्रयोग गरेको देखिन्छ । हिरोइन’ले बोकेको ब्याग’को कुरा किन भइर’हेको छ भने यसको मूल्य सुन्दा सायद तपाईलाई पत्याउन मुस्किल पर्छ ।
सामान्य देखिने यो व्यागको मूल्य २ लाख ५० हजार पर्ने भारतीय सञ्चारमा’ध्यमहरुले जनाए’का छन् । महंगो ब्याग बोकेकै कारण यतिबेला अनुष्का भारतीय सञ्चार माध्यम’मा स’माचार बनेकी छन् । भारतीय सेलीब्रेटीहरुले प्रयोग गर्ने यस्ता सामानको मुल्यका बारेमा बेलाबेलामा भारतीय सञ्चार माध्यममा समाचा’र बन्ने गरेका छन् ।
Prevबहिनीलाई साक्षी राखेर पूजालाई पठाए पल शाहले यस्तो सन्देश (भिडियोसहित)
Nextबेवारिसे श’व भनेर फेवातालवाट बाहिर निकालेपछि कृष्णको उड्यो होस्, आफ्नै भाईलाई मृ’त देखेपछी (भिडियोसहित)